खेलकुद – TajaNepal
EnglishApril 2, 2019
काठमाडौँ । बारामा अचानक आएको आँधीहुरीसँगै व्यापक जनधनको क्षति भएपछि सहयोगको अपिल गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत्, कलाकार, नेता, शिक्षक, पत्रकार, विद्यार्थी सङ्गठन, सर्वसाधारणसम्मले बाराबासीको दुःखमा साथ दिनु जरुरी रहेको भन्दै सहयोगको अपिल गरेका हुन्…
EnglishMarch 27, 2019
काठमाडौँ । एयरपोर्टमा विमान ल्यान्डिङ प्राधिकरणको सम्पत्तिमा ठगहरू मौलाउँदै गरी उडा न थन्क्याएबापत नागरिक उड्डययन प्राधिकरले निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीबाट कसरी शुल्क उठाउँला ? प्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीन उडाउने हिमालय एयरकै रू. १६ करोड ५० लाख ३९ हजार…
काठमाडौँ । राष्ट्रको ढुकुटी बाँडेर ठूलोे दलका ठूलै नेताहरूले १२ वर्षमा रू. ३ अर्ब ९५ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम बाँडेर आर्थिक अपचलन गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वले मितव्ययितालाई लत्यायो । गुट र पार्टीका आधारमा यसरी पैसा बाँडेको…
आर्थिकMarch 27, 2019
काठमाडौँ । अरूलाई प्रजातन्त्रवादी नदेख्ने, आफू भने कार्यकर्ताको तल्लो तहबाट निर्वाचित हुन नसक्ने डरले सधैँ स्वतः केन्द्रीय प्रतिनिधि बन्ने काँग्रेसी प्रजातन्त्र यस पटक ५६ जिल्लाका सभापतिहरूले उदाङ्गो बनाए । सभापति शेरबहादुर देउवाको टिमले पार्टीलाई गाउँ…
आर्थिकMarch 26, 2019
काठमाडौँ । उखानै छ– नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो ! नेपालको वर्तमान सरकार त्यही लाइनमा चलेको छ । यो सरकारले तीन वर्षअगाडि सम्पन्न दाता सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुसार दाताहरूबाट पुनर्निर्माणमा के–कति रकम लियो, त्यसबारे सत्तासीन पार्टी नै बेखबर…
काठमाडौँ । सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही कार्यालय आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यसम्पादन गर्न…
EnglishMarch 26, 2019
काठमाडौँ । समाजमा हाम्रो स्थान कहाँ हुने भनेर दीर्घकालीन दृष्टिकोण नबनाए आगामी दिनमा अझै अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ । यसबाट बाहिर निस्कन ०७ सालदेखि ०८७ साल अर्थात् सन् २०३० सालसम्मको लक्ष्य कोर्नुपर्ने हुन्छ । यसै प्रसङ्गमा…
आर्थिकMarch 25, 2019
सरकारका यी संस्थान कहिले सध्रिएलान ? काठमाडौँ । समिति गठन हुने, सुझाव दिने तर सम्बन्धित पक्षले कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने रोगले आलोचित नेपाल आयल निगमको आन्तरिक व्यवस्थन सुधारका लागि १५औँ उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । जनताप्रति सेवाको भावना नभएका,…